Dejan Stanković oo talo muhiim ah u jeediyay kooxdiisii hore Inter Milan kahor kulanka Barcelona ee tartanka Champions League – Gool FM
Dejan Stanković oo talo muhiim ah u jeediyay kooxdiisii hore Inter Milan kahor kulanka Barcelona ee tartanka Champions League
(Seri A) 18 Okt 2018. Ciyaaryahankii hore Inter Milan ee Dejan Stanković ayaa uga digay kooxdiisii hore ee Nerazzurri inay iska ilaawaan Barcelona xilligan oo ay diirada saaraan kulanka Derby di Milano.
Kooxaha daris wadaag ah ee Inter Mila iyo AC Milan ayaa ku dagaalami doona Axada soo aadan kulanka xiisaha badan ee la wada sugayo Derby di Milano horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Laakiin halyayga kooxda Inter Milan Dejan Stanković ayaa wuxuu ka hadlay muhiimada uu leeyahay kulanka Derby di Milano kahor inta aan la gaarin kulanka ay isla isbuuca soo aadan ay Barcelona kula ciyaari doonaan tartanka Champions League.
“Waa laka qeyb sami doonaa magaalada, wuxuuna noqon doonaa kulanka Derby di Milano mid aad u xiiso badan, Inter Milan aad ayay u fiican tahay xili ciyaareedkan, jir ahaan iyo maskax ahaanba, waxaana u rajeenayaa wax walba ee wanaag ah”.
“Hadii aan u hadlo ciyaaryahan hore ahaan, in lagu ciyaaro kulan sidaan u adag sida ugu dhaqsida badan, kadib kulamada caalamiga ah ma ahan wax fiican, waxay ku fiicnaan lahayd kulanka labaad ee xiga, laakiin uma baahnid inaad eegto”.
Si kastaba Garoonka Giuseppe Meazza ayaa martigalin doona kulanka adag ee Derby di Milano ay ku wada ciyaari doonaan kooxaha Inter Milan iyo AC Milan, kaasoo ka tirsan kulamada 9-aad xili ciyaareedkan ee horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga, kahor inta aysan u safrin Spain, si ay ugu wajahaan Barcelona Arbacada soo socota garoonkooda Camp Nou kulanka wareega 3-aad ee tartanka Champions League.
Madaxweynihii hore kooxda Real Madrid oo ku qeexay iibka Cristiano Ronaldo go’aan doqonimo ah
Real Madrid oo xiriir la sameesay Antonio Conte, muxuuse ka yiri macalinka reer Talyaaniga xiisaha kaga yimid kooxda Los Blancos